Muqdisho:-Shirweynihii Wadatashiga ee Hannaanka dib-u- heshiisiinta oo lasoo gaba-gabeeyay. | Raadreeb
Muqdisho:-Shirweynihii Wadatashiga ee Hannaanka dib-u- heshiisiinta oo lasoo gaba-gabeeyay.
Shirweynihii Wadatashiga ee Hannaanka dib-u- heshiisiinta, ayaa xalay si rasmi ah loo soo gaba-gabeeyay, waxaana laga soo saaray war-murtiyeed dhowr qodob ka kooban.
Shirka ayaa waxaa uu socday tan iyo 13-kii bishan, waxaana furitaankiisii ka qeyb-galay, Ra’iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mudane Mahdi Maxamed Guuleed, wasiirada arrimaha gudaha maamul gobolleedyada iyo sidoo kale marti sharaf kale.
Madaxweynaha Jumhuuriyada Federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullahi Farmaajo, ayaa xalay ka qeyb-galay xiritaankii shirweynaha, waxaana ummada Soomaaliyeed uu kula dar-daarmay in laga shaqeeyo danta guud.
“Dhamaanteen waxaan rabnaa “Nabad iyo Nolol”, qof walba oo Soomaali ah waa in uu oggaadaa in qabiil aan wax ku tari weeynay, waxa naga dhexeeya waa Qaranimo”, sidaasi waxaa yiri Madaxweynaha.
Dib-u-heshiisiinta ayaa loo arkayaa halka keliya ee Soomaali ay isku imaan karto, waxaana qodobka dib-u-heshiisiinta uu qeyb ka ahaa Ololihii doorashada uu kusoo galay Madaxweynaha Jamhuuriyada Federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Halkaan ka aqriso War-murtiyeedkii laga soo saaray shirka:
Shirweynaha Wadatashiga Qaran ee Hannaanka Dib-u-heshisiinta Soomaaliya 17, June 2017
B. In ergooyinkii Shirweynaha loo jeediyey mawduucyo aasaas u ah gaarista hannaan dib-u- heshiineed oo loo dhan yahay, si qoto-dheerna u qeexaya nuxurka uu yeelan karo hannaankaasi iyo heerarkiisa kala duwan. Qaybtaan waxaa lagu lafa-guray mawduucyada hoos ku qoran waxaana soo jeediyey khubaro shirka kala shaqaynaysay Wasaaradda.
1. In dadka Soomaaliyeed, meel kasta oo ay joogaan, u diyaar-garoobaan dib-u-heshiisiin dhab ah oo dhammaystiran.
2. Si dib-u-heshiisiin waarta, laga wada raali yahay oo xanaf-tiran loo helo, waa in la dejiyo HANNAAN.
(hab-raac dhammaystiran) oo jeexaya waddadii (roadmap) loo mari lahaa dib-u-heshiisiin isu soo celisa kalsoonidii iyo walaaltinimadii dadka Soomaaliyeed ee colaaddu kala irdhaysay.
3. In la is barbar wado dhammaystirka dawladnimo iyo dib-u-heshiisiinta bulsho, si ay labadaasi isu kaalmeeyaan.
4. In dejinta hannaanka dib-u-heshiisiintu noqdo mid talo badan la galiyey oo turxaan baxsan kalsooni buuxdana lagu wada qabo, la wada leeyahay, isla markaana abbaartiisu tahay hirgelinta dib-u- heshiisiin gun weyn oo dhab ah, kuna qotonta run, cadaalad iyo is-cafis.
5. In hindisaha dib-u-heshiisiinta hogaamintiisa iyo hirgelintiisuba ay noqdaan kuwo Soomaaliyi iska.
leedahay, u madax-bannaan tahay, oo gacanta ku hayso bilaw ilaa dhammaad.
6. In ay dawladdu agaasinto oo fududayso hirgelinta hannaanka dib-u-heshiisiinta iyada oo la kaashanaysa dowlad goboleedyada iyo khubarada Soomaaliyeed ee nabadaynta iyo xallinta khilaafaadka ku xeeldheer.
1. In ay dowladdu hirgeliso balanqaadkeedii dib-u heshiisiinta.
2. In dowladdu mudnaan gaar ah siiso dhaqaalena u qoondayso deminta khilaafyada hadda taagan ee dhiiggu ku daadanayo si hanaanka dawladnimadu u hanaqaado.
3. In la taageero oo la tayeeyo hay’adaha iyo qaybaha bulshada ee u xil-saaran deminta khilaafyada.
iyo mushkiladaha ergooyinka shirku xogtooda uruuriyeen.
4. In dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyaduba si degdeg ah wax uga qabtaan cadaalad- darrooyinka sida qaybsiga khayraadka, adeegyada, awoodda (metelaadda). Sidoo kale xad- gudubyada ka dhan ka ah bani’aadanimada arrimahaas oo ay ergooyinkii shirku marar badan kusoo celceliyeen.
5. Shirku wuxuu ku baaqayaa in la dedejiyo istaraatiijiyada iyo qorshaha dib-u-heshiisiint, isla
markaana si degdeg ah looga hawl galo colaadaha taagan.